सरकारप्रतिको असन्तुष्टी : जनगणनाका सुपरीवेक्षकलाई सास्ती - Khabar Center
‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ शुरु भइरहेको देशको १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा सरकारले गत भदौ ३० गतेदेखि असोज १८ गते सम्म तालिम प्राप्त सुपरभाइजरहरुलाई सर्वसाधारणका घर घरमा पुगेर जनगणना घर सुचिकरण गर्न आग्रह गरिरहेको छ । हरेक दश दश वर्षमा गरिने जनगणना नेपालमा सन् १९११ बाट सुरु भएको हालसम्म नेपालमा ११ औं पटक जनगणना भैसकेको छ र यस वर्ष १२ औं पटक राष्ट्रिय जनगणनाको काम शुरु भइरहेको छ । गत असार महिनामा सकिने भनिएको जनगणना कोभिड १९ का कारण पछाडि सर्दै मुख्य रुपमा गणना कार्तिक २५ बाट मंसिर १० गते सम्म सक्ने योजना छ ।
तथ्याङ्क संकलनका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो भरपर्दो र मूख्यमूख्य सूचना संकलनको स्रोत जनगणना आधुनिक तवरले सन् १९५२/५४ मा भएको थियो । त्यसबेला जनसंख्या करिब ८० लाख भएको तथ्यले देखाएको छ । गत वर्ष २०११ को जनगणनाको संख्या बढेर २ करोड ६४ लाख भन्दा बढी भएको देखिन्छ । नामले जनगणना भनिरहे पनि त्यस विषयमा यस विषयभित्र अन्य तथ्यहरु प्नि संकलन गरिएको छ । जस्तो कि यसवर्ष पनि जनसंख्याका हिसावले परिवार संख्या, सम्पत्ति विवरण, ऋण सुविधा, तालिम सम्बन्धि विवरण गरी ७ वटा प्रश्नहरु लिएर सुपरभाइजरहरु सर्वसाधारणका ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको अवस्था छ । संघीय प्रणालीमा मुलुक प्रवेश गरी सकेपछि यो गण्ना नीति निर्माणका हिसावले महत्वपूर्ण छ । छिनछिनमा मोवाइल, टेलिभिजनमा बजिरहेको विज्ञापनको साथ शुरु हुँदै गरेको जनगणनाले तथ्यहरु विशेषगरी प्रकाशन गरेपछि उक्त नियम कानुनहरुको निर्माणमा महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । तर तथ्याङ्क संकलन राम्ररी हुन सकेन भने मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । विशेष गरी शहरी इलाकामा यस्तो समस्या बढ्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणनामा खटिएका हाम्रा सुपरिवेक्षकहरुले शहरी क्षेत्रमा तथ्याङ्क भर्नका लागि पटकपटक धाउँदा पनि सर्वसाधारणको व्यवहार देखेर आफूलाई कठिन भएको महसुस गरिरहेका छन् । साथ सूचना लिन खोज्दा गेट नखोल्ने, कुकुर फुकाएर छोडिदिने, बच्चालाई बाहिर पठाई अभिभावक कोही नभएको भन्न लगाउने, डेरावालहरुको बसाइको सूचना नदिने, प्रश्नको जवाफ निर्धक्कका साथ जवाफ नदिने सम्पत्ति विवरण र बैठकमा खाता खोल्ने बारेमा प्रश्न गर्दा उत्तर दिन हिचकिचाउने भएको कारण जनगणनाको तथ्याङ्क सही नआउने जोखिम उच्च रहेको छ ।
हाल राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पहिलो चरणको गणना कार्यक्रममा घरपरिवार सुचिकरणका लागि सुपरिवेक्षकहरु घर आगन पुगिरहेको अवस्था भए पनि सर्वसाधारणका लापरवाही र वेवास्ताका कारण जनताको सही उत्तरको अपेक्षा गर्दै, सुपरिवेक्षकले पटक पटक जानुपर्ने अवस्थाले के तथ्याङ्क विश्वसनीय आउला त ? भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ ।
सुपरिवेक्षकले उत्तरदातालाई तपाईंले बैंक तथा कुनै वित्तिय संस्थाबाट ऋण सुविधा लिनु भएको छ भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तरदाताहरु उल्टै तपाईंले तिरिदिनुहुन्छ भन्ने प्रतिप्रश्न गर्छन् । एक व्यक्तिसँग जम्मा दुई मिनेटको समय लगाएर प्रश्न सोध्ने काम हुँदा पनि सर्वसाधारण तत्काल बाहिर नआउने दुई तिन पटक सम्म बोलाउँदा पनि आलेटाले गरेर टार्न खोज्ने समस्या बढ्दो छ । अझ कतिपयले त किन सूचना दिने कर उठाउन ? सरकारले के दियो हामीलाई ? हामी किन सूचना दिने ? सरकारसँग माग्नु जे जे सूचना माग्नु छ भन्ने जस्ता टिठलाग्दा जवाफहरु समेत दिने गरेको पाइयो । यसको मुख्य समस्याको जरो भनेको अपेक्षाकृत रुपमा सरकारको कामप्रतिको असन्तुष्टि अनावश्यक करको बोझ, सम्पत्ती सम्बन्धी गोपनियता भङ्ग हुने डर, जनगणना सम्बन्धी प्रचार प्रसारको अभाव एवं जनगणनाबारे महत्व बुझाउन नसक्नु नै हो । अतः बाँकी रहेको दुई महिनाको अवधिमा प्रर्याप्त प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने देखिएको छ । वडा वडाबाट माइकिङ्ग गरी सुव्यवस्थित तवरले घर दैलोसम्म पुग्ने हो भने यो कार्यक्रम केही हदसम्म सहज होला भन्न सकिन्छ ।
सूचनाको दुरुपयोग नहुने कुराको प्रत्याभुति गराउनुपर्ने, जनचेतना जगाउनुपर्ने, गलत सूचनाको प्रवाह गर्ने वा सूचना दिन आनाकानी गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने । त्यस्तै जनगणनाको महत्ववारे जनतालाई सुसुचित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अन्त्यमा हाल सुपरिवेक्षकहरुले भोगिरहेको समस्या भन्दा यो समस्या गणकहरुले भोग्नुपर्ने हुन्छ र अन्तत्वगत्वा सूचना संकलन र सही तथ्याङ्क नै आउन नसक्ने स्थिति आउँछ । यसको गलत नतिजाको परिणाम देश दश वर्ष पछाडि घकेलिने अवस्था मात्र आउँदैन गणनाका लागि खर्च हुने करोडौं रुपैयाँ पनि बालुवामा पानी हाले सरह हुनेछ । यसमा सरकारी निकायले गहन ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति :आश्विन १७ २०७८ आइतवार - ११:४६:२८ बजे